वेदमा राजनीतिक दर्शन – Astrology & horoscope
– डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री
राजनीति शब्दले राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण, नागरिकका गतिशील जीवनपद्धति र समर्पणको भाव प्रकाशित गर्दछ । राष्ट्रवासीलाई समुन्नत, न्यायपूर्ण तथा समृद्धिको बाटोमा लैजाने व्यवस्था उत्तम राजनीतिक व्यवस्थालाई वैदिक दर्शनमा राजनीति भनिएको छ । वैदिक दर्शन मानवीय जीवन पद्धति र समाजलाई सत्यको मार्ग देखाउने दृष्टिकोण हो ।
राजनीतिकर्मीहरू त्याग, निष्ठा, समर्पणका प्रतिमूर्ति र समाजका प्रतिनिधि तथा विश्वास पात्र पनि हुनुपर्दछ । वैदिक कालीन राजनीतिक पद्धतिको इतिहास नक्षत्र विज्ञान र श्रुतिपरम्पराअनुसार इसापूर्व तीस हजार वर्षपहिले पुग्दछ । वैदिक दर्शनमा राजनीतिक शास्त्रलाई राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, दण्डनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नामले व्याख्या भएको पाइन्छ । वेदमा राजशास्त्र तथा राजनीतिक दर्शनको बारेमा वर्णन गरिएको छ ः सर्वे लोकाः राजधर्मे प्रविष्टाः — सम्पूर्ण नागरिकहरू राजधर्ममा प्रविष्ट होऊन् । राष्ट्रको उन्नतिमा सहभागी बनून् र राष्ट्रलाई समृद्धशाली बनाउन् ।
नागरिकहरू राष्ट्र सञ्चालनको पद्धतिमा आबद्ध भई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनून् । जनतन्त्रका मान्यताहरू स्थापित होऊन् । राष्ट्रका सम्पूर्ण निकायहरूमा उनीहरूको समान सहभागिता होस् भन्ने भाव वर्णन भएको पाइन्छ । राजशास्त्रको अभिप्रायः राजनीतिज्ञको कर्तव्य, शासनपद्धति, राष्ट्रप्रमुखले राज्यसञ्चालनका लागि लागू गर्ने विभिन्न नियम–उपनियम, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको विवेचना हो । असल शासकले नागरिकका प्रत्येक हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति असल दण्डनीतिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दण्डनीति सम्पूर्ण रूपमा परिष्कृत, सत्य, निष्ठा र आदर्शका आधारमा परिभाषित हुनुपर्दछ । वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति गराउनका लागि नागरिकका हकअधिकारलाई व्यवस्थित गर्न दण्डनीतिको विधान भएको पाइन्छ । जुन राष्ट्रमा न्याय व्यवस्था र दण्डनीतिको प्रयोग सम्यक रूपले भएको हुन्छ, त्यो राष्ट्र वा समाजमा स्थिरता, समृद्धि र एकताको सूत्रमा बलियोसँग आबद्ध भई नागरिकहरू प्रसन्न रहेका हुन्छन् ।
दण्डनीतिको उचित अनुशरण राष्ट्रप्रमुख र न्याय व्यवस्थापकले गर्नुपर्दछ । अनुचित, अमर्यादित र अनैतिक दण्डनीतिको प्रयोगले नागरिक पनि आक्रोसित वा भयभित हुन्छन् र राष्ट्र समाजका लागि पनि घातक सिद्ध हुन्छ । सुशासन, न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि दण्डनीतिको व्यवस्था र कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । दण्डको प्रयोग हरसमय व्यवस्थित हुनुपर्दछ । निर्बललाई मात्र नभएर बलशालीलाई पनि, सामान्य नागरिक मात्र नभएर राष्ट्रप्रमुखलाई पनि दण्डको भागीदार बनाउनुपर्छ । आचार्य कौटिल्य (चाणक्य)ले दण्डव्यवस्थाको कठोरताका बारेमा चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार, वास्तविक पीडितले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ । अन्यायी र विधर्मीलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने विधान आचार्य कौटिल्यले गरेका छन् । कम दण्डको प्रभाव पनि समाजमा रहँदैन । अति कठोर दण्डको प्रभावले पनि समाजलाई आतंकित बनाउँछ । तसर्थ, समान दण्डको व्यवस्था उत्तम मार्ग हो ।
राजनीतिक शास्त्रको प्रचलित नाम नीतिशास्त्र पनि हो । नीति शब्द नी धातुबाट बनेको छ । नी प्रापणे धातुबाट लैजाने अर्थमा नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु लोकाः यया स नीतिः । अर्थात् जसद्वारा नागरिकले आ–आफ्नो आचरण, सदाचारले लोकलाई स्थापित गरेका हुन्छन्, कुमार्गबाट हटाएर सन्मार्गतर्फ लाने, असत्यबाट सत्यको बाटोतिर लाने, जनताका दुःख, कष्ट र पीर मार्काबाट सुख, शान्ति तथा समृद्धितर्फ लम्कने मार्ग नै असल राज्यनीति हो । शुक्राचार्यले पनि नयनात् नीतिरुच्यते भनेका छन् । शुक्रनीतिमा धर्म या सन्मार्गतर्फ लाने, आदर्शपूर्ण जीवनयापन गर्नका लागि बनाइएको उत्तम व्यवस्थालाई नै नीति भनिएको छ । शुक्राचार्यले नीतिशास्त्रको बारेमा वर्णन गरेका छन्– परोपकार नै पुण्य हो पाप नै जनतालाई दुःखी तुल्याउनु, कष्ट दिनु हो । अहिलेको धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गर्ने सभासदबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? तसर्थ धर्म निरपेक्ष भनेको पापलाई प्रोत्साहन गर्नु, समाजलाई कष्टकर तुल्याउनु, दैनिक उपभोगका सामानहरूमा कालाबजारी गराउनु, यही राष्ट्रप्रमुख र राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य हो ?
विश्वको सबैभन्दा प्राचीन वैदिक वाङ्मय ऋग्वेदमा सूत्रगत रूपमा केही सूत्रहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्फोट रूपमा भए पनि राजनीतिशास्त्रको तŒव प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्रको रूपरेखा तयार गर्नका लागि वैदिक वाङ्मयका चारै वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यग्रन्थ, उपनिषद्आदि समावेश गर्नुपर्छ । वेदका ६ अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष वैदिक वाङ्मय नै हुन् । यसमा आरण्यक र उपनिषद् आध्यात्मिक विषयप्रधान हुन् । यसमा राजनीति विषयक सामग्रीहरूको प्रायः अभाव छ । वेदान्तमा पनि यी विषयका सामग्रीहरू केही रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजा जनकको दर्शन, वेदान्तका ग्रन्थहरूमा सूत्रात्मक रूपमा राजनीतिदर्शनको बारेमा चर्चा पाइन्छ ।
यजुर्वेद, अथर्ववेदमा राजनीति विषयक पर्याप्त सामग्रीहरू पाइन्छन् । राष्ट्रको समृद्धि, सुखशान्तिको कामना, राज्याभिषेक, राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रिय गौरवको अभिवृद्धि, विश्वशान्तिको स्थापना राजनीति र कूटनीतिको सम्बन्ध आदिका विषयमा चर्चा भएको पाइन्छ । वैदिककालीन राज्यव्यवस्थामा यज्ञको बारेमा सेना, सेनानी र सेनापतिको कर्तव्य र अधिकारका सन्दर्भमा, उद्योग र व्यवसाय, शस्त्रअस्त्र, क्षत्रीय धर्म, राजधर्म, विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व, जनकल्याणको भावना, सर्वभूतात्मवाद, समदृष्टित्व, तैत्तिरीयसंहिता, काठसंहिता, ऐतरेयब्राह्मण आदि ग्रन्थमा राजनीतिशास्त्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश रहेका छन् । राजकर्मचारीको गुण, विविध प्रकारका करहरू र व्यापारका बारेमा पनि उल्लेख छ ।
पाणिनिको अष्टाध्यायीमा राजनीतिक शास्त्रसँग सम्बन्धित तथ्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । वैदिक दर्शनमा राष्ट्रप्रमुखको गुण, अमात्य, अमात्यपरिषद्, शासनतन्त्र, न्याय र दण्डव्यवस्था, सेना र सेनापति, सैनिक, जनपद, समूह, आयुधजिवि, कृषि, भूमि परीक्षण सूचनाको आदान–प्रदान, गौआदि पशुपालकको व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, गृहनिर्माण, वास्तुविद्या, भूमिका प्रकारहरू, पानीको स्रोत र व्यवस्थापन, शिक्षा, साहित्य र सिर्जना, तन्त्रमन्त्र, अनुसन्धान, कुटनीति, दण्डनीति, समाज नीति, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय, निर्यात र आयातित सामानहरूको व्यवस्थापन, जनसमुदायलाई संवृद्धशाली बनाउने उपाय, दुष्टहरूलाई दण्ड र सज्जन नागरिकको रक्षा, वेद वेदान्त, उपनिषद् आदिको चर्चा, स्वास्थ्य विज्ञान, वस्त्र–आभूषण, खरखजाना, हातहतियारको निर्माण र प्रयोग, वनचर, गोचर, भूमिको प्रयोग सम्पूर्ण जनसमुदायको कल्याण, सहास, पुरुषार्थ र परिश्रम, उन्नति र प्रगति आदिका बारेमा वर्णन गरिएको छ । वैदिक दर्शनमा भनिएको छ— सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया… सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन् र सबैले नाना, छाना र खानाको उचित व्यवस्था गर्न सकुन् ।
अन्तमा, हजारौं हजार वर्षदेखि हिमवत क्षेत्रमा नेपालको अस्तित्व रहेको वैदिक दर्शनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको मौलिक मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र गतिशील जीवनपद्धति नै नेपाली राष्ट्रियता हो । युगौंदेखि चलिआएका ती नेपाली मौलिक मान्यताहरूलाई निरपेक्ष बनाउन कुन अभिष्टले खोजिएको हो ? जनतामा आपसी द्वन्द्वको बीजारोपण कुन कुत्सित अभिष्टले गराउन खोजिँदै छ ? नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरूलाई ध्वस्त बनाएर राष्ट्रको अस्तित्व, नेपालको गौरव, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई जर्जर बनाउनुका पछाडि कसको के स्वार्थ लुकेको छ ? तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका जनसमुदायहरू पीडित र दुःखित छन् । कुन अभीष्ट पूरा गर्न जनताका मौलिक मान्यता यति निर्मम प्रहार गरिएको हो ?
← वेद र मानव शरीर संरचना
वेदमा वस्त्र →